I-Ence ngoku kulindwe ukuvalwa kwe-Pontevedra cellulose | Ezezimali
Okulindelwe yi-ENCE kwiimarike ze-equity ngoku kuxhomekeke kwisigqibo esinokubakho sokuvala indawo yokugaya iPontevedra. Ngale ndlela, kule mpelaveki iphelileyo umboniso obuzinyaswe kakuhle ububanjwe kwizitalato zedolophu elikomkhulu lephondo lasePontevedra naseMarín kunyanzelwa ukuba kuvalwe Umzi mveliso weEnce. Ngaphantsi kwebhanna enesihloko esifana noku kulandelayo: “Ukupheliswa kwepola kunika ulwandiso lwe-Ence. Indibaniselwano yococeko pole da ría ”, ukufuna ukongezwa kwe-Ence. Le yimeko enokuthi ithintele ukunyuka kwenkampani kulungelelwaniso lwamaxabiso ayo.
Ngexesha langoku, apho i-Ence iba lolona khuseleko lunenzuzo kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex35, enye yezona zinto zixhaphakileyo kuzo zonke. Ngenzuzo yonyaka efikelela kumanani aphindwe kabini kwaye kulindelwe ngokubanzi ukudlula amanqanaba akhoyo ngoku kumaxabiso. Ukusukela eli xabiso lidweliswe kwi-Ibex 35 ayikayeki ukunyuka, kunye nengqondo kunye nezilungiso ezihambelanayo. Ngaphezulu kwamaxabiso aphezulu kwimarike yaseSpain, ngakumbi leyo yecandelo lebhanki.
Kodwa ukuvalwa okunokwenzeka kwePontevedra cellulose kusebenza njenge Ikrele leDamocles Ukuqhubeka nokuphakama kwayo ngoku. Ukuya kwinqanaba lokuba yeyona nto igqibayo ukugqiba ukuhamba kwayo kwiinyanga ezizayo. Ukuze isenzo sabo samkele ukuthenga okanye, ngokuchaseneyo, ukuthengisa. Akumangalisi ukuba ukuvela kwayo kwintengiso yesitokhwe kulungelelaniswe yile nto yokuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi basalindelwe. Kungenxa yokuba ayinakulityalwa ukuba kwiiseshoni zorhwebo zamva nje ukungazinzi kuye kwenyuka kakhulu. Umahluko ukusuka kwiseshoni ukuya kwenye ukuya kuthi ga kwi-8%.
1 Ence: elinye lamaxabiso anyukayo
2 Umngcipheko ophezulu kulungiso
3 Ngeendaba ezintle kakhulu
Ence: elinye lamaxabiso anyukayo
Kule meko ngokubanzi, kuya kufuneka ukuba uqaphele kakhulu kula maxesha okuvalwa kweselulosi yePontevedra. Apho, naziphi na iindaba zingakhokelela kumaxabiso abo kwelinye okanye amanye amanqanaba kwisicatshulwa. Okwangoku, iphepha lokusila lephepha likazwelonke lithengisa kumanqanaba ee-3,80 ze-euro ngesabelo ngasinye, ngohlaziyo lonyaka olukumanani aphindwe kabini. Ukuba lelinye lamaxabiso acetyiswayo ngabahlalutyi bemarike yezabelo. Ngeenjongo ezikhawulezileyo ezikumanqanaba aphezulu kancinci kunee-euro ezine.
Nangona kunjalo, kwaye ngaphandle kokuxabisa kwayo kwiinyanga nje ezidlulileyo, akukho mathandabuzo ukuba lolunye lwezokhuseleko olunezona zinto zinobuzaza ekucwangcisweni kwamaxabiso abo. Umahluko phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi enokuthi fikelela kwi-5% okanye nangakumbi ngamandla. Ukusuka kule ndawo yokujonga, kukhuseleko olunobungozi ngakumbi kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho kuphela abona bantu banoburharha abakwimeko yokuvula isikhundla kule nkampani idityaniswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35.
Umngcipheko ophezulu kulungiso
Ngayiphi na imeko, awungekhe ulibale ukuba utyhilelwe ukunciphisa amaxabiso akho ngenxa yokunyuka kwakho kwangoko. Kodwa malunga nokuvalwa kweselulosi yePontevedra. Ukongeza ezininzi ezingaziwa ngaphezu kokufunwayo yinxalenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho nantoni na enokwenzeka kuxhomekeke kuthethathethwano oluqalisiweyo ukusukela ngoku. Ngaphaya kolunye uthotho lokuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukuze inyuke okanye yehle kwintsalela yonyaka.
Kwiiseshoni zoyilo oluthile olusezantsi, ayinakulityalwa ukuba i-Ence yenye yezitokhwe ezimbalwa ukuvala ngengqondo elungileyo kwaye ngamanye amaxesha ngepesenti ekufanele ukuba uyiqaphele ngenxa yokuqina kwayo. Nangona kungoku nje ukwindlela enqamlezileyo enkulu ye ikhosi oza kuyithatha amaxabiso abo ukusukela ngoku. Kungenxa yokuba ayicacanga ncam ukuba inokuphuhla phantsi kwempazamo njengoko kwenzekile kude kube ngoku. Ngandlela thile, iyakuxhomekeka nakwinto ekhethiweyo yokulingana kwamazwe, njengakwezinye iindawo zentengiso yekhaya. Nangona, ewe, imeko-bume yayo iyathandeka ngokucacileyo ukuze ukwazi ukonga imali ngokwenza olu bhejo.
Ngeendaba ezintle kakhulu
Ukujongana neziphumo ezibi zokuvalwa kwesixhobo sokugaya sePontevedra, ezinye iindaba ezilungileyo kakhulu kwimidla yabo yeshishini ziye zavela kwimithombo yeendaba. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu inento yokwenza nobunzima be amandla avuselelwe ye-Ence eHuelva. Ukuya kuthi ga apho isihlaziye ngokuzithandela isatifikethi se-EMAS saseYurophu, umgaqo woluntu kulawulo lwe-eco kunye nophicotho-zincwadi lwe-eco ejolise ekukhuthazeni ukuphuculwa okuqhubekayo kwintsebenzo yemibutho.
Njengeziphumo zakho ezizenzileyo kwikota ephelileyo. Apho kubonisiwe ukuba iziphumo zayo ancitshiswe nge-40%, zichaphazeleka kukwahluka kwezinga lotshintshiselwano kunye nokwanda koluhlu lwempahla enombono wokucinywa kweNavia biofactory, eya kuthi ibe nde kunesiqhelo ukwandisa amandla ayo malunga neetoni ezingama-80.000. Ezi ziindaba ezamkelwe kakuhle kakhulu kwiimarike zezemali ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa eziqwalaselweyo kwinxalenye yexabiso.
Inyani yokuba inkampani ilubhangisile utyalo-mali lweSicwangciso-qhinga sayo kwisityalo sayo iPontevedra kwaye iza kugxila eNavia ibikhona, ngenxa yokungaqiniseki kwezomthetho okubangelwe kukutshintsha kweekhrayitheriya ze-DG Costas kulwandiso lwe-Ence kwiphondo lasePontevedra . Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeengxaki zakho ezinkulu ukuze ukwazi ukucaphula ngexabiso elingcono kulo nyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ence ngokuxhomekeke ekuvalweni kweselulosi yePontevedra